Anosibe Miaramila mamo nanambana basy mpivarotra
Andrasana izay fanampim-baovao sy fanampim-panazavana avy amin’ny mpitondra fanjakana fa raha ny angom-baovao natao omaly dia nanondrana indray ny miaramila mpiambina mpitondra fanjakana ambony eto amin’ny firenena.
Azo sary ary efa niparitaka tamin’ny facebook ny lehilahy iray, hita mazava fa mamo. Raha ny filazan’ny nanatri-maso dia “adjudant chef” eo anivon’ny Primatiora, ilay lehilahy nanao be fiavy, niditra avy hatrany tao amina trano fivarotana iray teny Anosibe ka namoaka ny basy poletany sy nanambana ny mpivarotra tao. Tsy mbola fantatra mazava ny antony, fa re fotsiny hoe nisy tsy fifankahazoan-dresaka tao. Fantatra koa fa nisy olona ambony grady noho izy nanatrika ny zava-niseho. Na io farany aza dia tsy nanampy azy fa nanampy ny olona naka « vidéo » ny zava-niseho mba hiparitahan’ny vaovao. Misesy ny fisian’ny fanaparam-pahefana ataon’ny mpitandro ny filaminana rehefa any anaty Bar. Mampanontany tena ny zava-mitranga tahaka izao , izay tsy voalohany fa efa nisy maromaro teo alohany. Tahaka ny maka vatomamy ve ny maka basy any anaty toby sy toeram-piasan’ny mpitandro filaminana eto Madagasikara ? Na handeha hirevy any anaty “Bar” aza izany dia mahazo mitondra basy ve ? Milaza fa manatsara sy manadio ny mpitandro filaminana ireo tompon’andraikitra be galona, kanefa toa misy foana ny fihoaram-pefy. Ny trangan-javatra toy izao no mahatonga ny olom-pirenena tsy mahatoky intsony ny mpitandro filaminana ka mampirongatra ny fanapahan-kevitra mitondra mankany amin’ny fitsaram-bahoaka.